トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvakanakira nekuipira aiming muenzaniso zvidukuduku nepachinko parlors
Kunyange nepachinko yokumusoro kuti vaende kwamuri, ndinofunga kuti pane nguva dzose akanyanya kunaka kwete muenzaniso zviduku kushanda. Zvikurukuru kana zvaiswa kurutivi chitoro ari shure, nhamba iri shoma chaizvo zvivezwa zvakadaro. Sezvo mutengi, hte asi kuduku muenzaniso, asi pane chokwadi zvakare payakaipira, pane kunobatsirawo. Saka, maererano kukanganiswa muenzaniso muduku, kubatsira nekuipira, tichakurukura chii zvinhu.
First sezvo kuvamirira, nokuti muenzaniso mashoko kushoma, riri kugadzirwa kwakadaro uye havaoni chaizvoizvo yarova haizivikanwi. Mukuwedzera, oparesheni angangotadza convergence kuti mukana kuti pasi, zvingava zvakaoma rokuongorora sefungu ROM.
kuduku yokutevedzera, zvikuru kana kwete nevakawanda, uwandu yekare mienzaniso kuti vaenda pamusoro nguva kubva sero. Nokuti chinangwa, isu zvinoedza mashoko akadai kugadzirwa kana chemwenje nepakati mashoko anova diki chaizvo. Paakataura sei kuunganidza mashoko kuita, izvozvo ucharasika chete kusimbisa chaizvoizvo yakarova pachako.
chete yarova zvishoma, nekuti handizivi kwazvo, uchada chisarudzo zvimwe mwero inivhesitimendi. The kutanga mubhizimisi mashoko vakaungana, ndechokuti anofanira kukurukurwa. Uyewo, nguva dzose ezvinhu apo pasina kumhanya kunoratidzwa muenzaniso zviduku. Chokwadi chokuti oparesheni haisi, paavhareji zvakanaka nemafungu uye mafungu zvakaipa chinowanzoitika stagnate, panguva mafungu zvakaipa, aizotora nguva convergence anosvika jackpot mukana.
kuti andobata muenzaniso muduku, kana kuwedzera mukana kuhwina, mari uye basa mashoko mutero, uyewo unofanira zivo kuverenga mafungu.
In ndiko zvinobatsira kuti zvinopesana, kuvhiyiwa zvakadaro uye kuti kunoita kuti varove kuchikuva kunangidzirwa kwete, nokuti mumwe munhu haasi chaizvo akauraya, kana munhu uyo ??anogona vanopedzisira kusvika pamwero kuzvidzora mari, kuverenga sefungu pa ndechokuti nyore. Nguva dzose achimhanya simba zviduku yokutevedzera, dzakanga mukana kuti mutambo kuitwa panguva nehasha.
kuna, zvakadai iwe vari Data kutarisa chete, nokuti zvakare haana zvakawanda varove mumwe munhu, paavhareji Waves uye vamire pamusoro convergence nguva kuri nyore kuona kuburikidza. Uya yakarohwa munguva ino zvikuru kazhinji, dzakadai mukana yakakwirira ndechokuti nguva paminiti nyore kuverenga, imi kunonyanyisa makomborero.
Uyewo, zvakadai zviduku yokutevedzera, achava zvinhu zvakawanda kushandiswa chiitiko womuenzaniso. Zvisinei, sezvo kazhinji chete kuwedzera oparesheni, ndapota tarisa zvipikiri. Zvizhinji kare vhiki rimwe data, kana pane nzira vachiziva payout ruzivo, hazvirevi nani kuti chokwadi.